ရေဘေးသင့် ဒေသများ ယခုထက် အခြေအနေ ဆိုးလာပါက ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးကို အ? - Yangon Media Group
ရေဘေးသင့် ဒေသများ ယခုထက် အခြေအနေ ဆိုးလာပါက ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးကို အ?
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအချို့တွင် ကြုံ တွေ့နေရသည့် ရေဘေးသင့်ဒေသများ၏အခြေအနေမှာ ယခုထက်ဆိုးရွားလာပါက ကြုံတွေ့နေရသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များကို အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ကြေညာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေညာဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိသေးသော်လည်း မြို့အလိုက် အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေမှုများရှိနေကြောင်းသိရသည်။
”အရေးပေါ်အခြေအနေက တော့ လူ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ အရေးကြီးလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ဘေးကျရောက်တဲ့ဒေသတွေအဖြစ် ကြေညာတာတွေရှိတယ်လေ။ အဲဒီအပေါ်မူတည်ပြီးမှ သွားရေးလာ ရေးခက်ခဲသွားပြီ။ စားရေးသောက် ရေး၊ နေရေးထိုင်ရေး ခက်ခဲသွားပြီ။ အဆက်အသွယ်တွေပြတ် တောက်သွားပြီစသဖြင့် ဒါတွေ ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ မဖြစ်မ နေကြေညာရမယ်ဆိုတော့ ကြေ ညာရမှာပေါ့။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲကြေညာခဲ့တာလေ။ လေးနေရာကိုပေါ့”ဟု လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် ပြောသည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ရေဘေးသင့်ပြည်သူ ၅ဝဝဝဝ ကျော်ရှိနေပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ များက ကူညီကယ်ဆယ်မှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရသည်။ ”လောလောဆယ် ကျောက် ကြီးတို့၊ နတ်သံကွင်းတို့ အဲဒီဘက် တွေမှာ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေ ထောက်ပံ့တာတွေကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့အတူ ဌာနကလူတွေလည်းပါတာပေါ့။ ကားတွေ ပိတ် နေတာလည်း ဝိုင်းပြီးအားပေးတာ ပေါ့။ ထောက်ပံ့တာပေါ့။ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေက အားလုံးပေါင်း ၅ဝဝဝဝ ကျော်ရှိနေပြီ။ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးက ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေပေါ့”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးက ဆက်လက်ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းအနေဖြင့်လည်း ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးငါးခုရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၃ မြို့နယ်တွင် ကြက်ခြေနီအင်အား ၁၈ဝ ကျော်ဖြင့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”အစ်မတို့ကြက်ခြေနီတွေက ရေစကြီးပြီဆိုကတည်းက မြေနိမ့် ပိုင်းကို ရေဝင်လာပြီဆိုရင် အဲဒီအိမ်ထောင်စုတွေကိုရွှေ့ဖို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကို ဝိုင်း ရွှေ့ပေးတယ်ပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ ကလေးတွေကို အရင်ရွှေ့တယ်ပေါ့။ တပ်မတော်သားတွေ၊ အစ်မတို့ကြက်ခြေနီ တွေက ဘေးလွတ်ရာကို ရွှေ့ပေးတာတွေ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုရောက်ရင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ကျန်း မာရေးဝန်ကြီးဌာနကလာဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးခန်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ စားရေး သောက်ရေးအတွက်လည်း ကူညီ ပေးတယ်။ အခုဆိုရင် အစိုးရက ရေဘေးသင့်တဲ့သူတွေကို ငွေကြေး လှူဒါန်းတာတွေရှိတယ်။ ကြက်ခြေနီအင်အား ၁၈ဝ ကျော်နဲ့ ပြည် နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးငါးခုမှာ ရေ ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ အစ်မတို့ကြက်ခြေနီအသင်းအနေနဲ့လည်း လှူဒါန်းသွားဖို့ ဆွေးနွေး နေတာတွေရှိ ပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ ဘေးဒုက္ခ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူး၊ ဒေါ်မိုးသီတာဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောပြသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင်လည်း ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ ၁၅ဝဝဝ ခန့်ရှိပြီး အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ စားနပ်ရိက္ခာများဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့ နယ်၊ မြို့လေးကျေးရွာအုပ်စုသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းသည့် ခုနစ်စင်ကြယ် ပရဟိတအဖွဲ့ခေါင်း ဆောင် ကိုတင်ထွန်းအောင်က ”ဆန်တို့ ဆီတို့၊ အသင့်စားလို့ရတဲ့ ယမ်ယမ်တို့ပေါင်မုန့်တို့လှူနေတယ်။ နှစ်ပြန်ကြော်တို့ လှူနေပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေကတော့ မြစ်ဘက်အခြမ်းကတော့ အကုန်လုံး မြုပ်နေတယ်။ ဒီဘက်ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖွင့်ပြီး အကုန်လုံးလုပ်နေတာ။ အစ်ကိုတို့အဖွဲ့ ၁ဝ လောက်တော့ပါတယ်။ သွားလာရေးကတော့ ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းက ပိတ်ထားလို့ အမြန်လမ်းပေါ်ကပတ်ပြီးသွားရတယ်။ ဒီဘက်ထဲကို ပတ်လာရတယ်။ ရေဘေးဒုက္ခသည်က တစ်ရွာတည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ ပဲခူးမြစ်ဘက်ခြမ်းက မြုပ်နေတဲ့ရွာတွေလည်းပါတော့ ရွာပေါင်း ၂၆ဝ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ကတော့ စားဖို့ပဲ”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရှစ်ခုတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကြောင့် ရေ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းစသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များရင် ဆိုင်နေရပြီး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် တပ်မတော်သားများမှ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးတွင် ရေဘေးသင့်သူ ၁၅ဝဝဝ ကျော်အတွက် ဒုက္ခသည်စခန်း ၁၂ ခု ဖွင့်လှစ်ထား၊ ချက်ပြုတ် စားသောက်ရ
မိုးရွာသွန်းမှုများခြင်းကြောင့် အောင်လံတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၁ဝ ကျော် သက်တမ်းရှိ စေတီတစ်ဆူ ပြို??
ပရဟိတနှင့် ဒရာမာဇာတ်ကို အခြေခံ ရိုက်ကူးသွားမည့် ၂၅% ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ကန်တော့ပွဲပေး
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကို လေးမျက်နှာမြို့နယ် အိုင်သပြုကျေးရွာ အုပ်စု ပြည်သူများ ဆန္ဒ
”ကိုယ်တိုင်လည်း Single Mother တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဝတူ တစ်ခုလပ် အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ချင်းစာနာတယ်”
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံတွင် လူပေါင်းရှစ်သိန်းကျော်ကို ကာလဝမ်းရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထို?
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ဗ